Budada Raw Methandriol budada ah (521-10-8) Soosaarayaasha & Bixiyeyaasha - Warshadaha
Methandriol, oo loo yaqaan 'methylandrostenediol', waa aerosik iyo synthetic steroid (AAS). Waa 17α-alkylated AAS iyo 17a-methylated Wariantiisa ah ee hormoonka ah ee hormoonnada iyo iyoostoosto.
Video ah budada methandriol (521-10-8) video
Budada Methandriol ee macdanta (521-10-8) Sharaxaad
Kareemka Methandriol waa steroid oo aad u la mid ah 5-androdiol marka laga reebo inay tahay C-17 alpha alkylated and also esterified at both ends. Dufanka Methandriol waa la metabolized methyltestosterone, metabolos estrogenic iyo 5-alpha yareeyo iyo isrogens kuwaas oo gacan si aad u aragto muuqaalka daawada ee steroid this. "Kororka waxtarka" ee steroid-ka soo-baxa marka la isticmaalo asrogyo kale oo asrogyo ah sida Duchaine iyo kuwa kaleba waxay la xiriiri karaan xakamaynta 11-beta hydroxylase taas oo keenaysa korodhka culeyska biyaha iyo saamiga anticatabolic iyada oo loo marayo xaddiga serum Cortisol. Sida ku xusan meelo kale, xakameynta 11-beta hydroxylase wuxuu sababi karaa dhiig-karka iyo saameynaha kale ee wadnaha.
Budada methandriol ee qamriga (521-10-8) Smamnuucista
Product Name Kalluun Methandriol ah
Magaca Kiimikada Mestenediol; Diolandrone; Metandriol; Methandrolan; Protandren
CAS Number 521-10-8
Molecular Wsideed 304.47
barafku Psaliid 205 ° C
Biological Life-Life Ku saabsan saacadaha 6
SOlubility L. in alcohols
Application Horumarinta horumarinta jirka iyo horumarinta cayaaraha
Waa maxay budada methandriol dufanka (521-10-8)?
Methylandrostenediol (methandriol for gaaban) waa stero-anabolic oo laga sooco dihidototestosterone. Daawada lafteeda waxaa lagu soo saaraa laba nooc oo kala duwan. Marka hore waa methylandrostenediol, oo loo isticmaalo marka daaweynta afka laga qaato (steroid) (inkasta oo duri durbadiiba laga helo Maraykanka). Waxaa sidoo kale laga helaa methylandrostenediol dipropionate esterified, kaas oo loo diyaariyey sidii loo mudo. Qaybaha daawada ee la isku daro waxay ku kordhiyaan dhaqdhaqaaqa daroogada dhawr maalmood. Asal ahaan, daawooyinka methandriol waxaa loo bedelay foomamka c17-alkylated-ka 5-androstenediol. Methandriol waxaa lagu sifeeyay anabolic daciif ah oo leh guryaha daciifka ah ee itrogenic. Waxa kale oo ay u muuqataa in ay muujiso heerarka qaar ka mid ah firfircoonida estrogenic, taas oo samaynta steroid this ka yar tahay ideal for dieting. Daroogada ayaa guud ahaan loo tixgeliyaa mid aad u khafiif ah, mana aha mid caan ah oo ku caanbaxsan kuwa jidhka iyo cayaaraha. Mararka qaarkood, si kastaba ha ahaatee, waxaa loo isticmaalaa meel ka mid ah walxaha kale ee anabolic / androgenic ah marka la heli karo marka la heli karo.
Sidee budada methandriol loo isticmaalo (521-10-8) shuqullada
Dufanka methandriol ee budada ah (521-10-8)
Xeerarka hore ee qorista daawada Stenediol waxay ku talinayaan qadar daawo ah 25 oo la siiyay 2 ilaa 5 wiigii asbuucii iyadoo la isticmaalayo wadada afka, buccal, ama intramuscular. Qalabka jirka ama ujeedooyinka wax-qabadka kordhiya, qiyaasta caadiga ah waxay ku jirtaa inta udhaxeysa 25-50 mg maalin kasta oo foomka afka ah, iyo 200-400 mg toddobaadkii oo la qaato tallaalka. Si loo xajiyo heerarka dhiigga xitaa xitaa la isku duro, waxaa badanaa la qaataa sadex ilaa afar maalmood. Wareegyadu waxay guud ahaan u socdaan wax aan ka badneyn 6 ilaa toddobaadyada XNUM, si loo yareeyo halbowlaha iyo cidhiidhiga qiimaha beerka iyo kolestarolka. Heerkani isticmaalka wuxuu ku filan yahay guulo dhexdhexaad ah oo ka yimaada murqaha iyo xoogga, taas oo la socota heerka hoose ee biyaha sii-haynta.
Inkastoo ay suurtogal tahay in la isticmaalo methylandrostenediol oo kali ah ujeedooyinka dhismaha muruqyada, waxaa badanaa lagu daraa walxaha kale ee anabolicska si saameyn xoogan leh. Isku dar ah Deca-Durabolin® ama Equipoise®, tusaale ahaan, faa'iidooyinka la qiyaasi karo ee qiyaasta muruqyada adag, oo aan la ogaan heerkulka ba'an ee biyaha, waa la ogaan karaa. Tani waa isugeynta guud ee badi Australiyaanka ah ee isku dhafan oo ay ku jiraan methylandrostenediol. Markaad raadinayso faa'iido badan oo aad u macquulsan ee ku jirta masska, waxaa laga yaabaa in lagu daro dheecaanka iyo testosterone xooggan. Kobaca la soo sheegay waxay noqon kartaa mid aad u wanaagsan, laakin isticmaaluhu wuxuu sidoo kale ku qasbanaan doonaa in uu wax ka qabato saameyn xoogan oo saameyn ku yeelata saameynta estrogenic. Daroogada mararka qaarkood waxay sidoo kale si fiican u isku dhafan yihiin anabolics aan ahayn aroosyada sida Winstrol®, Primobolan®, ama oxandrolone. Natiijada halkan waa inay noqotaa saameyn dheeraad ah oo ku saabsan murqaha muruqyada, iyadoo leh faa'iido dhexdhexaad ah oo ah unug adag
Xeerarka hore ee qorista daawada Stenediol waxay ku talinayaan qadar daawo ah 25 oo la siiyay 2 ilaa 5 wiigii asbuucii iyadoo la isticmaalayo wadada afka, buccal, ama intramuscular. Methylandrostenediol guud ahaan laguma talin dumarka inay ujeedo jireed - ama ujeedooyinka kor u qaadista ayadoo ay ugu wacan tahay dabeecadda asrogenic iyo u nugul inay soo saarto saameynta daawada.
Budada methandriol dufanka (521-10-8) Faa'iidooyinka
Methandriol wuxuu leeyahay anabolic iyo sidoo kale sifooyinka asrogenic kaas oo ka caawiya dhismaha muruqyada iyo xoogga. Waxaa sidoo kale lagu kala diri karaa saliid. Waxaa intaa dheer, ma haynin biyo badan waxayna ku jirtaa muddo dheer oo ka badan methandriol. Waxaa loo isticmaalaa iyada oo la raacayo steroids kale halkaa oo ay sii wanaajiso saameynta unugyada steroid by kor u qaadida xasaasiyad of receptor unugyada. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa daawada xoolaha. Ciyaartoyda isticmaalaya kan ayaa sidoo kale yeeshay murqo, xoog iyo sidoo kale hoos u dhigista biyaha.
Soo iibso budada methandriol from Buyaas.com
Root Stanozolol (Winstrol) budada (10418-03-8)